Indawo entle yaseLalini w / iGadi yaseZulwini
Člunek, South Bohemian Region, Czechia
Igumbi lethu lokulala elinomtsalane eli-2 lilungele ukuphumla kunye neholide ehlaziyayo.
Sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke kwaye kumnandi kangangoko sinako ukuze sikwenze umbulelo okhethekileyo ngokukhetha ukuhlala apha siza kukupha ibhotile ethandekayo yeBohemian Sekt kunye nephakheji encinci yokwamkela.
Ukwenza iholide yakho iphumle kangangoko sinakho ukukuthengela igrosari, ukuze uyilungiselele ekhitshini lakho xa ufika. Ungasithumela umyalezo nje ngoluhlu lwakho lwegrosari kwaye siya kukuthengela kwaye sikunike irisithi ukuze usihlawule xa ufika (asizukubiza ngokuziswa, oko simahla).
Asiyohotele kodwa sifuna ukubonelela ngohlobo olufanayo lokugqwesa njengoko iihotele zisenza kuba sikholelwa ukuba iiholide zenzelwe ukuba zizodwa.
Inxalenye yeSentire (URL HIDDEN) Iqela, apha ukwenza iiholide zakho zibe nobugqi kangangoko.
Misela kwilali entle enamaphandle angaqhelekanga kunye namahlathi alungele ukuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile. Fumana ubuhle boMzantsi weCzech. Kufuphi kukho iinqaba kunye needolophu zasentsomini, amachibi kunye neendawo zokutyela eziya kunceda ukwenza iholide yakho ibe ngumlingo. Kukwakho nebala legalufa kunye nokukhwela ihashe kumgama we-12km ukusuka kwiflethi. Amasimi ajikeleze i-Kunejov afanelekile ukubaleka kusasa kunye nokuqubha emva kwemini kwelinye lamachibi e-Kunejov.
Abanye kufuneka babone:
- Inqaba yaseHluboka
-Imbali yeMyuziyam yeeMoto eNova Bystrice
- České Budejovice
-I-Austria yimizuzu eyi-15 kude
- Amachibi aKhuselekileyo okuqubha kuwo ajikeleze ilali ehamba umgama.
- Ikhosi yagalufa
- Ukukhwela ihashe
Ekufikeni kwakho uya kufumana incwadana egcwele ulwazi malunga nommandla, izinto onokuzibona, iihambo onokuzithatha. Ndiya kukuvuyela ukukunceda uququzelele nantoni na oyifunayo ukuze wenze iholide yakho iphelele.